Cabdi Xaashi oo amray in la hakiyo doorashada 16 kursi | KEYDMEDIA ONLINE
Inkastoo SEIT-ka Soomaaliland, ay garab mareen hadalka Xaashi, hadana tallaabada ay qaadeen ayaa ka dhigan, in markii ugu horreeyay qodobbo laga qaatay habraacii lagu heshiiyay 22 Agosto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyihii hore ee Golaha Aqalka sare, Cabdi Xaashi Cabdullahi, oo ka mid ah Guddoonka Sare ee Doorashada Somaliland, ayaa soo jeediyay in la hakiyo doorashada 16-ka kursi ee dhawaan uu shaaciyay Guddiga Doorashada Gobolada Waqooyi (Somaliland) (SEIT).
Warka ka soo baxay xaafiiska Cabdi Xaashi, oo ku socda SEIT-ka Soomaaliland, isla-markaasna lagu wargaliyay Guddiga Hirgelinta Doorashada Heer Federal (FEIT) iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay hubin dheeraad ah oo la xariirta qabashada doorashada kuraasta.
Cabdi Xaashi, wuxuu xusay in si doorashooyinku ugu qabsoomaan si xor iyo xalaal ah oo daah furan, waafaqsanna habraacayada doorashada ee lagu heshiiyey 17kii Sep 2020, 27kii May 2021 iyo 22 Aug 2021, loo baahan yahay in la hubinayo habsami u socdka iyo sugnaanta doorashada.
“Waxa lagu war-gelinayaa Guddiga Hir-gelinta Doorashooyinka Dadban ee Gobollada Woqooyi (SEIT) iyo Guddiga Hir-gelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal (FEIT) in la joojiyo gebi ahaanba faafinta kuraasta 16 ka ah inta go'aan laga gaarayo oo la xaqiijinayo cuqaasha, qoondada haweenka iyo hufnaanta doorashada”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Cabdi Xaashi.
Kuraasta uu Guddoomiyihii hore ee Golaha Aqalka sare amray in doorashadooda dib loo dhigo, ayuu Guddiga Doorashada Gobolada Waqooyi (Somaliland) (SEIT), soo saaray 30/11/2021, wuxuuna Cabdi Xaashi u muuqdaa inuu ka hor tagayo shaacinta musharixiinta.
Daqiiqado kadib, markii uu soo baxay warka Xaashi, Guddiga doorashada gobollada waqooyi ayaa markii u horeysay baahiyay magacyada odayaasha dhaqanka iyo xubnaha bulshada rayidka ee soo xuli doona ergada dooraneysa afar kursi oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Inkastoo SEIT-ka Soomaaliland, ay garab mareen hadalka Xaashi, hadana tallaabada ay qaadeen ayaa ka dhigan, in markii ugu horreeyay qodobbo laga qaatay habraacii lagu heshiiyay 22 Agosto, tan iyo markii la iba-furay doorashada golaha shacabka.
Guddiga Doorashooyinka Heer Federal (FIET), ayaa dhawaan laalay habraaca doorashooyinka ee kuraasta Gobollada Waqooyi, [Soomaaliland] kaasoo ay diyaariyeen, Guddoomiyihii hore ee Aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Hayeeshee, Mahdi Maxamed Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay luuqadda uu ku qornaa qodobka 4-aad ee War-saxaafadeedkii ka soo baxay 5 December 2021, Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee (FEIT).